जोगाउँदै गंगापूर्ण ताल- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार
गंगापूर्ण ताल संरक्षणका लागि करिब १ सय मिटर पर्खाल लगाइयो
पर्खालले हिमपहिरो र लेदोसहित बाहिरबाट बग्ने ढुंगामाटोलाई छेक्ने
भाद्र १६, २०७५ आश गुरुङ
मनाङ — बर्सेनि खस्ने हिमपहिरोले पुरिँदै जान थालेपछि मनाङको गंगापूर्ण हिमताल संरक्षण गर्न पर्खाल लगाइएको छ । पर्खालले हिमपहिरो र लेदोसहित बाहिरबाट बग्ने ढुंगामाटोलाई छेक्नेछ ।
मनाङको मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिका ६ मा पर्ने गंगापूर्ण तालमा लगाइएको पर्खाल । तस्बिर : आश
पर्खालले मानिस तथा चौपायालाई तालमा पस्नबाट जोगाएको स्थानीयले बताएका छन् ।
चारैतिरका ढुंगामाटो थुप्रिएर ताल साँघुरो बनाएपछि यसको संरक्षणमा स्थानीय तह लागेको हो । यसअघि संरक्षण र सम्बद्र्धन हुन नसकेको गंगापूर्ण तालको संरक्षणका लागि पहल थालिएको मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिका अध्यक्ष कान्छा घलेले बताए । ‘ताल दिनदिनै पुरिँदै गयो । माथिबाट हिमपहिरोले लेदो बगाएर तालमा झारेर पुर्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘तलबाट मानवीय गतिविधिले पुरिँदै गएको छ । ताल त हराउनै लाग्यो । त्यसैले पर्खाल लगाएका हौं ।’
ताललाई फराकिलो बनाउन आगामी दिनमा भित्र थिग्रिएर रहेको ढुंगामाटोलाई पनि निकाल्ने योजना रहेको उनले बताए । ‘तालभित्रको ढुंगामाटो कसरी निकाल्न सकिन्छ । निकालेमा केही असर पर्छ कि पर्दैन भनेर हामीले छलफल थालेका छौं,’ उनले भने ।
समुद्री सतहको ३ हजार ५ सय ४० मिटर उचाइमा पर्ने गंगापूर्ण ताल मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिका ६ मा पर्छ । गंगापूर्ण हिमाल (७,४५४ मि.), अन्नपूर्ण चौथो (७,५२५ मि.), खाङसार काङबाट ‘ग्लेसियर’ पग्लेर आएको हिमनदीले गंगापूर्ण ताल बनेको छ ।
गाउँपालिकाबाट विनियोजित १० लाख रुपैयाँ र पर्यटन बोर्डबाट प्राप्त १० लाख रुपैयाँ साथै स्थानीयको श्रमदानबाट गंगापूर्ण ताल संरक्षणको लागि करिब १ सय मिटर पर्खाल लगाएको गाउँपालिका अध्यक्ष घलेले बताए । वडा ६ का अध्यक्ष सोनाम गुरुङले ताल संरक्षणका कार्य धेरै बाँकी रहेकाले आगमी दिनमा कसरी तालको संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए ।
‘पर्खाल लगाएर मात्रै काम पूरा भएको छैन वरिपरि वृक्षरोपण साथै पहिरोबाट जोगाउने तरिकाबाट छलफल गरिरहेका छौं,’ उनले भने । उनका अनुसार हिमपहिरोलाई रोक्न नसक्ने र ताललाई तालकै स्वरूप दिन नयाँ कदम चाल्नुपर्ने देखिएको छ ।
लमजुङबाट गंगापूर्ण ताल घुम्न पुगेका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख लोकराज पाण्डेले वरपर अग्ला पर्खाल लगाउनुभन्दा ताल बीचमा जमेको ढुंगामाटो तथा बालुवालाई झिकेर फालेमा ताल तालकै स्वरूपमा बस्ने बताए । ‘पर्खाल लगाउनु नराम्रो होइन । तालभित्र जमेको वस्तुलाई हटाउन सकियो भने ताल ठूलो र गहिरो पनि हुन्छ,’ उनले भने ।
करिब २१ दशमलव ०८ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको अनुमान गरिएको उक्त तालको आकार पछिल्लो समय घटेको स्थानीय बताउँछन् । ताल सफा भएको बेला नीलो, वर्षायाममा सेतो र हिउँदमा हिउँ जम्ने विशेषता यस तालमा रहेको मनाङका होटल एवं पर्यटन व्यवसायी कर्मा गुरुङ बताउँछन् । उनका अनुसार गंगापूर्ण पर्यटकीय गन्तव्य बने पनि पछिल्लो समय साँघुरिँदै गएकाले यसको रौनकता हराउँदै गएको छ ।
हिमालको फेदबाट बेलाबेलामा गइरहने हिमपहिरोको कारण हिलो र ढुंगामाटो तालमा थुप्रिन आएकाले ताललाई संकटमा पारेको उनले बताए । ‘१०/१५ वर्षअघि कहिलेकाहीं मात्रै हिमपहिरो खस्थ्यो, त्यसले खासै प्रभाव पार्ने थिएन । पछिल्लो समय कहिलेकाहीं ठूलो पहिरो खस्न थालेको छ । पूरै खाएर तालाम थुप्रिएको छ,’ उनले भने ।
गाउँपालिका अध्यक्ष घलेका अनुसार अनुसार चक्रीय अन्नपूर्ण पदमार्गमा आउने पर्यटकका लागि गंगापूर्ण ताल एउटा मुख्य गन्तव्य हो । ‘हाई अल्टिच्युट’ बाट बच्न पर्यटक मनाङमा एक दिन दुई रात बस्छन् । पर्यटक जसरी पनि गंगापूर्ण ताल पुग्छन् । ‘तालको आकार घटदै गएको हामीले महसुस गरेर यसको संरक्षणमा लागेका हौं,’ उनले भने । उच्च हिमाली क्षेत्रमा विस्तारै बढेको तापक्रमले हिमापहिरो खस्न गई तालको साँघुरिँदै गएको हुनसक्ने उनले बताए । ‘हिमालमा हिउँ पग्लिँदै गएको छ । पहिरो चलेर हिमनदीसँगै हिलो र ढुंगामाटो थुप्रिएको छ,’ उनले भने ।
सन् १९६० को दशकपछि गंगापूर्ण ताल बनेको अध्ययन अनुसन्धानबाट देखिएको २ वर्षअघि मनाङका स्थानीय विकास अधिकारी रहेका कृष्णप्रसाद धिताल बताउँछन् । ताल पुरिने क्रम जारी रहे २० वर्षमा ताल नहरने खतरा बढेको उनले बताए । कर्मचारीले २० वर्षसम्म स्थानीय निकाय सञ्चालन गर्दा उक्त तालको संरक्षणमा ध्यान नपुगेको स्थानीयको गुनासो छ ।
प्रकाशित : भाद्र १६, २०७५ ०९:१६
सरकारी र गैरसरकारी कार्यालयले कार्यक्रम गरेर मुद्दालाई पुरानो बनाउने र जबर्जस्ती बिर्साउन खोजेको आरोप
‘पीडितलाई न्यायको अनुभव नदिलाए कुनै पनि बेला घाउ बल्झिन सक्छ’
लमजुङ — राइनास १ भलायखर्कका टंकनिधि घिमिरेले बाबु तीर्थराज घिमिरेलाई बेपत्ता बनाउनेविरुद्ध कारबाही हुनुपर्ने भन्दै २ वर्षअघि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजबिन आयोगमा उजुरी दिए ।
२०५८ फागुन १७ मा गाउँकै ज्ञानोदय माविमा बोलाएर गोरखाको हर्मीस्थित तत्कालीन सेनाले लगेका तीर्थराजको अवस्था अझैसम्म अज्ञात छ । उजुरी दिँदा पनि सरकारले उनको अवस्थाबारे परिवारलाई जानकारी दिएको छैन ।
‘नेताका नाटक, सरकारका आश्वासन । भुलाउन दिएको राहत रकमले हाम्रो मन कसरी बुझ्छ ?’ टंकनिधिले भने, ‘खाली पीडा दिने मात्रै काम भयो । सधैं आँसु झार्ने मात्रै काम भयो । हाम्रा मान्छे कहाँ छन्, भन्नु पर्दैन ?’ उजुरी दिँदा आशा लागेर दिए पनि पछिल्लो समय न्याय पाउनेमा उनलाई भरोसा छैन ।
मध्यनेपाल १ जिताका रमेश पौडेललाई तत्कालीन सुरक्षा फौजले ०५८ चैत १२ मा पक्राउ गरेको थियो । त्यसपछि उनको कुनै खबर नपाएको पत्नी शकुन्तला बताउँछिन् । ‘कमसेकम कहाँ के भएको हो, यति मात्रै भनिदिए पनि चित्त बुझ्ने एउटा पाटो हुन्थ्यो,’ उनले भनिन् ‘सास रहुन्जेल आश हुन्छ नि । कि छैन भनिदिए हुन्थ्यो ।’ दूधे बालक छाडेर गएका उनी नफर्किएको उनले सुनाइन् ।
बेंसीसहर नगरपालिका ६ चण्डीस्थानकी मिठी अधिकारी छोरीबारेको जानकारी पाइन्छ कि भनेर द्वन्द्वकालीन मुद्दाका कुनै पनि कार्यक्रममा जान छाडदिनन् । जुनुसकै कार्यक्रममा पनि उनी गहभरि आँसु टिल्पिलाउँदै छोरीको अवस्थाबारे प्रश्न गर्छिन् । छोरी सीतालाई ०५८ चैत १४ मा नाल्माबाट सुरक्षाफौजले गिरफ्तार गरेर लगेको उनी बताउँछिन् । ‘तीन महिनासम्म मैले पुलिस कार्यालयमा देखेकी थिएँ । त्यसपछि कहिल्यै देख्न पाइनँ,’ उनले भनिन्, ‘बरु धनसम्पत्ति केही चाहिँदैन, छोरीको अवस्था बताइदिए हुन्छ ।’
बेपत्ताविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रि दिवसको अवसरमा बिहीबार रेडक्रस सोसाटी लमजुङ शाखाले बेंसीसहरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले छोरीको अवस्थाबारे जानकारी नभएपछि किरिया समेत नगरेको बताइन् ।
चण्डीस्थानकै सन्तबहादुर रिमालले सरकारी र गैरसरकारी कार्यालयले विभिन्न कार्यक्रम गरेर मुद्दालाई पुरानो बनाउने र जबर्जस्ती बिर्साउन लगाएको आरोप लगाए । ‘यतिका वर्ष बितिसक्यो । हाम्रा मान्छे कहाँ छन् समेत भन्न नसक्ने सरकारले राहत दिएको जस्तो गरी राजनीति गरेको छ,’ उनले भने । छोरा राजकुमारलाई तत्कालीन विद्रोही माओवादीले ०६१ भदौ ११ देखि बेपत्ता बनाएको उनले सुनाए ।
मध्यनेपाल ३ सूर्यपालकी मैया बस्नेत हिजोआज औपचारिक कार्यक्रममा सितिमिति जाँदिनन् । गए पनि बोल्दिनन् । बेपत्ता पतिबारे जानकारी लिन खोज्नेलाई उनी हत्तपत्त जानकारी दिन मान्दिनन् । ‘कार्यक्रममा गएर के हुन्छ ? बोलेर के हुन्छ ? त्यतिबेलै प्रहरी, त्यसपछि मानवअधिकार आयोग, एड्भोकेसी फोरम, आईसीआरसी सबैमा उजुरी दिएँ,’ उनी भन्छिन्, ‘२ वर्षअघि आयोगमा पनि उजुरी दिएँ केही भएन क्यारे ? कसैको भरोसा छैन ।’
उनका पति कृष्णबहादुरलाई ०५६ असार ३ मा सोतीपसलस्थित साथी रामचन्द्र गिरीको घरबाट प्रहरीले गिरफ्तार गरेको थियो । त्यसयता उनको अवस्था अझै अज्ञात नै छ । ‘देउवा (शेरबहादुर देउवा) कतिपटक प्रधानमन्त्री भए । प्रचण्ड (पुष्पकमल दाहाल) कतिपटक प्रधानमन्त्री भए । यी दुईजनाले जवाफ दिनु पर्दैन ?,’ उनले भनिन् ।
तत्कालीन स्थानीय शान्ति समितिमार्फत लमजुङका २७ जना बेपत्ताका परिवारले आफ्ना आफन्तलाई द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएको भन्दै आयोगमा उजुरी दिएका थिए । यीमध्ये १६ जना बेपत्ताका परिवारले राहत बुझदै आएका छन् । रेडक्रसका शाखा सभापति दीपक बरालका अनुसार जिल्लाबाट १६ जना बेपत्ता रहेको रेडक्रसको सूचीमा छ ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख लोकराज पाण्डेले बेपत्ता पारिएका परिवारको घाउमा नुन छर्किने मात्रै नभएर सरकारले मलमपट्टी लगाउनुपर्ने बताए । ‘पीडितलाई न्यायको अनुभव नदिलाए कुनै पनि बेला घाउ बल्झिन सक्छ । ख्याल गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी झंकनाथ ढकालले बेपत्ताका साथै द्वन्द्वपीडितलाई सरकारले राहत उपलब्ध गराउँदै आएको र पीडितले समयमै राहत लिन सुझाव दिए । ‘पीडितलाई जीविकोपार्जनमा समस्या भएको भनी सरकारले राहत उपलब्ध गराएको हो । थोरै हुनसक्छ । यसलाई सदुपयोग गरिए जीविकोपार्जनमा ठूलै परिवर्तन ल्याउन सक्छ,’ उनले भने ।
प्रकाशित : भाद्र १६, २०७५ ०९:१५